Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Palestine » Na-agbaji Stereotypes Iji Idozi Society
Dị ka ndị egwu niile na ndị na-ede abụ, Bashar Murad nwere olile anya na egwu ya ga-akpalite echiche dị mma na echiche dị jụụ n'uche ndị nụrụ ya. Sitekwa n'iji egwu ya na egwu ya nke a na-akụrụ ya, o yiri ka ọ na-emezu ebumnuche ya.
Bashar dị afọ iri abụọ na anọ, ọ na-eme kemgbe ọ bụ nwata. Ọ bụ ezie na egwu na-atọ ndị na-ege ya ntị na Middle East ụtọ, isiokwu nke nhọrọ ya na egwu ọ na-abụ anaghị abụkarị. Ikike nwoke na nwanyi, LGBT, nnwere onwe ikwu okwu na nnwere onwe nke ime ihe anabataghi ihe a nabatara na otutu ihe ndi obodo Arab-Islam.
Somefọdụ Bashar bụ "Middle East amamihe;" nye ndị ọzọ, ọ bụ ihe ọzọ kpamkpam.
Murad na-agwa The Media Line nsogbu ndị ọ nwere mgbe ọ bụ nwata n'ihi ihe a tụrụ anya n'aka ya, yana ọrụ "nkịtị" a tụrụ anya ya iburu. Mgbe ndị enyi ya ji ụgbọ ala plastik na ụgbọ elu na-egwuri egwu, ọ masịrị ụmụ bebi ma soro ndị enyi ya nwanyị na-egwu egwu. Dị iche adịghị mfe ebe ọ bụla, mana ọ na-esiri ike karị n'obodo ndị Arab dị n'ọwụwa anyanwụ Jerusalem, ebe a lere Murad anya dị ka onye na-abụghị.
Na nzaghachi, ụlọ ọrụ egwu Bashar ghọrọ ebe mgbaba-na ebe a na-alụ ya; ebe ọ bụghị nanị na ọ nabatara nsogbu ndị na-eme ka ndị agbata obi ya nwee obi iru ala, mana ọ na-eji ike nke nkwenye mee ya.
Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe niile ka ụzọ a si dị. Iji ike emegbu mmadụ mere ka Murad gbanwee ụlọ akwụkwọ ugboro atọ: “Ha mere ka ọ dị m ka ahụ́ erughị m ala n’ahụ́ m; o were m ogologo oge iji kwụsị nke ahụ, ”ọ gwara The Media Line. “Ndị mmadụ adịghị anabata ụmụ okorobịa ndị na-eme ihe e weere dị ka ndị e tere mmanụ; ha na-agba ụmụ nwanyị ume ịdị iche ma a bịa n'ihe metụtara ụmụ nwoke, ha na-akwa ha emo. ”
Bashar nọrọ afọ anọ na United States na-agụ nkwukọrịta na Bridgewater College na Virginia. N'ebe ahụ, ọ nwetara nnwere onwe ọ kwenyere na ọ metụtara ya n'ọtụtụ ụzọ, ha niile nyere ya ohere ịnabata onwe ya n'ikpeazụ. Nke a nyere ya ike ịlaghachi Jerusalem ka ọ nwee mmetụta ma nyere ndị ọzọ aka, dị ka ya onwe ya, dị iche.
Nghaghachi Bashar bụ mmeri. Ọ nwetara ọkwá dị elu mgbe, na November 2016, ọ bipụtara vidiyo vidiyo mbụ ya n'ịntanetị (https://www.youtube.com/watch?v=zbjhcKpU8_E) na-ekpochapụ ihe karịrị 100,000 echiche. E lere ihe nkiri a ka ọ dị ọhụụ ma bụrụkwa nke arụmụka n'ihi na ọ na-egosi ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ n'ubi ndị e chere na ha kwesịrị ekwesị maka naanị nwoke na nwanyị. Inshrah, onye gosipụtara dịka onye ọkwọ ụgbọ ala nwanyị na vidiyo ahụ gwara The Media Line na ahụmịhe ya na Bashar bụ "ihe ịtụnanya" ma chetaara ya na "enwere ndị ọzọ na-eme ihe ndị na-abụghị ọdịnala."
Dị ka Bashar si kwuo, ozi dị n’azụ abụ a, akpọpụtara nke ọma More Dị Ka Gị, "Ọ bụ ime ka ndị mmadụ bi n'obodo Arab nabata ndị ọzọ etu ha siri dị, na ịkwụsị ịtụ anya na mmadụ niile ga-abụ otu." Ọ na-agwa The Media Line na, "Ọ dị ezigbo mkpa ka ọha mmadụ nabata ndị ya dị iche iche karịa ịda mba."
N’abụghị anya, ọtụtụ mmadụ na-emegide egwu Bashar, na-agakarị na-akpọ ya mbibi na enweghị atụ nke ọha mmadụ Palestian. Ma ọbụghị otu a, maka Raed Al-Kobare, onye isi ngalaba na-ahụ maka egwu na Palestine Ministry of Cultural Affairs.
Banyere Inshrah, Al-Kobare gwara The Media Line na “ihe karịrị ụmụ nwanyị Palestine ise na-anya gwongworo na bọs na Ramallah n’onwe ya; na ụmụ nwanyị Palestine na-agba ọsọ, na-egwu egwuregwu ma na-eme nkà. ” Ma o kwetara na ụdị echiche ụfọdụ metụtara onye ọzọ. “Mamụ nwoke nọ n’obodo Arab nwere ike ịkpọ ya asị ma ọ bụrụ na ụmụ nwoke akpọọ ụmụ nwanyị ọrụ al-Kobare kwuru
Bashar na-agụ egwu ugbu a na Rimon College dị na Tel-Aviv, ma wepụtara ka ọ pụta olu(https://www.youtube.com/watch?v=IkUL5bTZztk), abụ ọhụrụ banyere imeri penchant na ụfọdụ Arab Arab iji wedata ndị "dị iche iche."
Na vidio a, “ọtụtụ olu isi ya nke na-eweda ya ala” na-eri nwunye nwanyị ọdịnala nke ejiri ejiji ya mara. N'ikpeazụ, ọ na-apụta "ụlọ mkpọrọ" ọdịnala ya, nke ihe mgbawa nke agba gosipụtara, yana abụ na-eso ya, "ihe niile dị mma na obere agba."
Guitarist Ahmed Azizeh nwere obi ụtọ ịbụ akụkụ nke ọrụ na isiokwu ndị na-ese okwu ya. Ahmed gwara ndị Meda Line, sị: "Achọrọ m ịgbanwe ndị mmadụ ma gbaa ha ume ịkwụsị iso igwe mmadụ ahụ ma bụrụkwa onwe ha." N'aka nke ya, Bashar na-ekwu na ọ "bụrụ maka mgbanwe na ọdịnihu dị mma ebe ndị mmadụ na-asọpụrụ ma na-anabata ibe ha na enweghị ọnọdụ."
Ọ bụ ozi dị mma nke yiri ka ọ na-ejide ya.
Africangbọ okporo ígwè ndị South Africa na-eme njem nlegharị, ndị Rovos Rail rutere Tanzania
Air Guru ghọrọ naanị ụlọ ọrụ na India na-anọchite anya BPPD Badung Tourism Promotions Board, Indonesia iji gbaa Bali Tourism si India ume